ओलीलाई रावलको कडा प्रश्न – सिके र प्रचण्ड बराबरी हुन् ?::Nepalese News Portal
ओलीलाई रावलको कडा प्रश्न – सिके र प्रचण्ड बराबरी हुन् ?
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी समिति सदस्य एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री भीमबहादुर रावलले सरकार र सिके राउतबीच भएको सहमतिप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । नेता रावलले उक्त सहमतिले कतै राष्ट्र टुक्र्याउने कुरालाई वैद्यता त प्रदान गर्दैन ? भन्दै प्रश्न समेत तेर्साएका छन् ।
सरकार र सिके राउतबीच ११ बुँदे सहमति भएको भोलिपल्ट शनिबार रिपोर्टर्स क्लबमा बोल्दै नेता रावलले भने, ‘देशलाई शान्तिको बाटोमा लैजान र समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउनको लागि सबै राजनीतिक दलहरु एकजुट हुनुपर्छ, यसमा कसैको विरोध हुँदैन। सरकारले त्यस्तो प्रयास गर्नुपर्छ । तर, राउतसँग सहमति गरेर त्यस्तो गरेको मलाई लागेको छैन ।’
यस्तै, नेता रावलले प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डलाई सिके राउतसँग तुलना गरेकोमा आफूलाई दुःख लागेको बताए । सरकार र सिके राउतबीचको ‘सहमति कार्यक्रम’ आफूले प्रत्यक्ष प्रशारणबाट हेरेको सुनाउँदै उनले पार्टी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिके राउतलाई पार्टीकै अर्का अध्यक्ष एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग तुलना गरेकोमा दुःख लागेको बताए ।
उनले भने, ‘हाम्रो अध्यक्ष प्रचण्ड र सिके राउतको तुलना गर्नुभयो, यसमा मलाई दुःख लाग्यो । देशद्रोही हो भनेर राउतलाई सरकारले जेल पठाएको व्यक्ति र हाम्रो अध्यक्ष प्रचण्डको चरित्र एउटै हो भनियो, यसको जवाफ प्रचण्डजीले दिने हो ।’